i-mut nohlelo olusha lokufunda luka-2020 - Ilanga News
Home Izindaba i-mut nohlelo olusha lokufunda luka-2020
i-mut nohlelo olusha lokufunda luka-2020
UMPHATHI waseMUT uDkt Enoch Malaza noLindiwe Sisulu.
ISITHATHE izinqumo ezinqala iMangosuthu University of Technology (MUT) ngezinhlelo zokuqedela lo nyaka ezifundweni njengoba uMengameli Cyril Ramaphosa evale izwe thaqa.
Lesi sikhungo sesibeke eqhulwini ukuthi abafundi okumele babuyele kuqala enyuvesi yilaba abenza unyaka wokugcina, abenza iziqu ezithe xaxa (post graduates), abakhubazekile nababandakanyeka kuma-practicals.
Ngokwesitatimende senyuvesi, lokhu kuzokwenzeka ngokulandela imigomo ebekwe wuhulumeni yokuvikela iCovid-19 ehlasele umhlaba wonke.
Umphathi weMUT, uDkt Enoch Malaza uthi uma kwenzeka uhulumeni engaliqaqi izwe ekupheleni kwenyanga, inyuvesi seyiqhamuke nezinhlelo zokuthi unyaka ka-2020 kuzokwenzekani ngawo.
“Umkhandlu wenyuvesi uzibophezele ekubeni lo nyaka kumele uqedwe kungabi bikho ukulimala kwawo. Izinqumo ezithathiwe ku-vunyelenwe nomkhandlu wonke wukuthi kabekho abafundi abazosalela emuva ezifundweni zabo nokumele bengaphothuli iziqu zabo,” kusho uDkt Malaza.
Uthi amanyuvesi amaningi aqhamuke nezinhlelo zokufundisa online, kodwa eMangosuthu kabasiyona le ngxenye ngenxa yezinkinga zomnotho nokuthi lesi sikhungo kasikulungele ukuqhuba izifundo online.
Le nyuvesi ngokohlelo lwayo, ithi uma izovula mhla ka-1 kuNhlangulana (June) iphothule mhla ka-24 kuZibandlela (December).
Uma kwenzekile yavula mhla ka 1 kuNcwaba (August) kuzophu-thwa mhla ka-20 kuNhlolanja (February) wonyaka ozayo, kanti mhla ka-1 kuMfumfu (October) kungaze kuqedwa mhla ka-31 ku-Mbasa (April) wonyaka ozayo.
Uthi okuningi bazophumela obala kukhona uma umengameli esecacisile ngokuqhubekayo ngokuvalwa kwezwe.
Kuzokhumbuleka ukuthi amanye amanyuvesi okubalwa i-University of Zululand athumelela abafundi umsebenzi online okungenye yezinto okukhalwa ngazo kwazise abanye abafundi kabanayo i-internet ezindaweni zasemakhaya.
Previous articleUfele “ukwenqaba ukuphekela umnyeni”
Next articleKuqembuke izinsika zamageza amahle